Dooli ku soo badanaya magaalooyinka waaweyn. - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dooli ku soo badanaya magaalooyinka waaweyn.
La daabacay måndag 6 augusti 2012 kl 11.23
Dooliga oo ku soo badanaya Iswiidhan. Foto: Maja Suslin/Scanpix
Dhibaatada jiirka ama dooliga ayaa caadi ku soo badaneysaIswiidhan. Shirkada xakameynta cayayaanka ee Anticimex ayaa waxay tira gaareysa 18 000 jeer qabatay howlo ay ku xakameeneysay wax yeelada jiirka iyada oo dhibaatooyinka ugu waaweyn ee wax yeelada jiirka ay ka taagan tahay magaalooyinka waaweyn ee dalka.
Gobolka Stockholm ayaa heerka uu soo batay jiirka waxay gaareysaa 79 boqolkiiba hase yeeshee shirkada xakameynta cayayaanka ee Anticimex ayaa garaneynin waxa sare u soo qaaday tirada jiirka hase yeeshee jiirka ama dooliga ayaa inta badan ka yimaada habka tubooyinka wasaqda ee dhulka hoostooda mara.
Shirkadda Anticimex ayaa sheegtay holwha la dagaalanka jiirka ee ay ka qabatay dalka oo dhan kala bar in ay ka qabatay caasimadda Stockholm iyada oo shirkada ku sheegtay in Stockholm keliya ay ka fulisay howlo gaaraya 5 424 howl galo lagu nadiifinayay jiirka.
Waxaa sidoo kale la sheegayaa in jiirka uu ku tarmo qashinka meelaha banaan loogu tago sida goobaha jirdiinka ee dadku ku nastaan.